असुरक्षित अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा
काठमाडौं । नेपालमा गरिएको कोभिड–१९ परीक्षणमा २ हजार जनामा पोजिटिभ देखिएको छ । तर, कोरोना परीक्षण प्रविधि, चिकित्सक र व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) अस्पतालमा पर्याप्त छैनन् । सरकारले कोरोना भा...
आजदेखि एक साताका लागि सबै सीमा नाका बन्द, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० देखि शत्प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिइने
canadanepal.com . ११ महीना अघि
काठमाडौँ - सरकारले कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि एक साताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट यात्रु आवागमन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओल...
स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई र प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय
९ चैत, काठमाडौं । सरकारले संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई) लगायतका सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यकर...
शंकास्पद बिरामी अस्पताल पुग्दा डाक्टर नै त्राहीमाम
९ चैत, पोखरा । २२ महिनाको बच्चालाई तीन दिनदेखि रुघाखोकी र ज्वरोले च्यापेपछि अभिभावकले आइतबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याए । बच्चा अभिभावकसहित ११ दिन...
छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई कोभिड-१९ संक्रमितको उपचारमा परिचालन गरिने
himalkhabar.com . ११ महीना अघि
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका र अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकलाई कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न भन्दै सबै प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। मन...
कोरोना प्रभावः अस्पतालका डाक्टर नै असुरक्षित
nepalnews.com . ११ महीना अघि
कर्णालीका चिकित्सकहरूले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को संक्रमण चेकजाँच गर्ने आफूहरूनै असुरक्षित भएको बताएका छन्। कोरोनाको संक्रमण परीक्षणका क्रममा चाहिने आवश्यक सुरक्षाका सामग्रीहरू नहुँदा आफूहरूले असुर...
कोरोनाको उपचारमा खटिनेलाई छैन् आवश्यक सुरक्षीत सामाग्रीहरु, चिकित्सकहरु चिन्तीत
प्रक्षा तिमल्सीना र दिलीप पोख्रेल (ईमेज) काठमाडौं, चैत ९ । कोरोनाभाइरसको उपचार गर्दा चिकित्सकहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरु आवश्यक पर्छ । तर सरकारले वीर, शुक्रराज, पाटन, भक्तपुर र सैनिक अस्...
प्रदेश २ को सीमा नाकामा उच्च जोखिम, न्यून सतर्कता
जनकपुरधाम, १० चैत । भारतको विहारमै कोरोनाबाट मानिसको ज्यान गएपछि थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने प्रदेश २ को सीमा नाकामा भने हेल्चक्र्याइँ रोकिएको छैन। थोरै जनशक्ति, सीमित स्वास्थ्य उपकरण र एउटै टोली दिनभर...
सरकारको निर्णयः एक साताका लागि नाका बन्द, स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता, संक्रमण रोक्न ५० करोडको कोष
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि एक साताका लागि सीमानाकाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एक साताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट यात्रु...
अस्पतालहरुले आइसीयूको संख्या बढाउँदै
रिया भण्डारी काठमाडौं, ९ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिए उपचार गर्न बिभिन्न तयारी गरिरहेको छ । त्यसैक्रममा अस्पतालहरुमा आइसीयू संख्या बढाउने र सिरियस बिरामी उपचार गर्ने उपकरण पनि बन्दोबस्...
भरतपुर कोरोना अस्पतालमा १० जना बिरामीको कोरोना परीक्षण, दुईजना आइसोलेसनमा
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालनमा भएको भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा आइतबारमात्रै १० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । ती मध्ये २ जनालाई आइसोलेसनम...